November 2019 – Gulled Salah
Gudoomiyaha iyo xubno Guddiga ah oo uu hogaaminayo ayaa kulamo gooni gooni ah la yeeshay haayado caalami ah.
Leave a Comment	/ Events / By guled
Waxaa maanta xubno ka socda Guddiga Doorashooyinku kulamo gooni gooni ah kula yeesheen magaaladda Nairobi sataakiil ka socota Hay’adda Interpeace iyo safaaradaha Sweden iyo Switzerland. Waxaa kulamada looga wada hadlay sidii Guddiga looga taageerilahaa hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee dhowaan laga hirgelindoono Puntland. Saad faahfaahin dheeriya u hesho guji Linkigan hoose. https://www.facebook.com/TPECPuntland #CodkaaguWaaMustaqbalkaaga. #CodkaaguWaaXaqaaga.
Gudoomiya iyo xubno Guddiga ah oo kulan la qaatay hay’adaha caalamiga ah iyo xubno ka socda beesha caalamka.
Xubno ka tirsan Guddiga Doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Guddomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre, ayaa maanta kulan la yeeshay hay’adaha caalamiga ah iyo xubno ka socda beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Nairobi. Kulanka waxaa looga wada hadlay sidii Puntland garab looga siin lahaa hirgalinta nidaamka xisbiyada badan iyo doorasho qof iyo cod ah oo laga …
Gudoomiya iyo xubno Guddiga ah oo kulan la qaatay hay’adaha caalamiga ah iyo xubno ka socda beesha caalamka. Read More »
Asixinta Guddiga Kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee TPEC.
Baarlamaanka Puntland ayaa saaka yeeshay fadhigoodii ugu horreeyey tan iyo intii ay doorteen guddoomiyaha cusub.Kalfadhigan ayaa waxa soo xaadiray 50 xildhibaan, waxayna si wadajira gacantaag ugu ansixiyee Guddiga Kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee TPEC. Saad faahfaahin dheeriya u hesho guji Linkigan hoose. https://www.facebook.com/TPECPuntland #CodkaaguWaaMustaqbalkaaga. #CodkaaguWaaXaqaaga.
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay haweenka Puntland.
Gudigga KMG doorashooyinka Puntland ayaa xarunta dhexe ee magaalada Gorowe ku qabtay kulan ay layeesheen haweenka Puntland, oo hormuud u tahay Wasiirada horumarinta Haweenka iyo arimaha Qoyska Puntland.Kulankaan ayaa qayb ka aha kulamadii Guddigu la yeelanayeen qaybaha bulshada iyo laamaha dawladda si looga miradhaliyo doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta Puntland. Saad faahfaahin …
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay haweenka Puntland. Read More »
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada.
Xubno katirsan Golaha Wasiirada Dawladda Puntland ayaa maanta Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland kulan kula qaatay xarunta dhexe ee TPEC. Kulanku wuxuu qayb ka yahay kulamdii Guddigu la yeelanay qaybaha bulshada iyo laamaha dawladda si looga miradhaliyo doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta Puntland. Saad faahfaahin dheeriya u hesho guji Linkigan hoose. …
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada. Read More »
Gudoomiyaha Guddiga iyo xubnaha guddiga ayaa la kulmay madaxa Interpeace ee Somalia iyo Puntland.
Waxaa saaka kulan ku qaatay xarunta dhexe ee Gudigga doorashooyinka Puntland(TPEC), madaxa Interpeace ee somalia Axmed Abdirixman Baadiyow oo uu wehelinayo madaxa Interpeace Puntland Xasan Ciise iyo Gudoomiye Guuleed Saalax Barre iyo xubnaha Gudigga KMG ee doorashooyinka Puntland. Waxayna kawada hadleen mudadii kulanku socday sidii loo hormarin lahaa dimoqraadiyada Puntland, islamarkaana TPEC iyo hay’adda interpeace …
Gudoomiyaha Guddiga iyo xubnaha guddiga ayaa la kulmay madaxa Interpeace ee Somalia iyo Puntland. Read More »
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay Safiirka dalka Sweden.
Waxaa galabta soo booqday xarunta dhexe ee Guddiga Safiirka dalka Sweden ee Soomaaliya Mr. Staffan Tillander iyo ku-xigeenkiisa Johan Svensson iyaga oo kulan la yeeshay Gudoomiye Guuleed Saalax Barre iyo xubnaha Guddiga kumeel gaarka ah ee Doorashooyink Puntland. Mudadii kulanku socday waxaa la iska waraystay hawlaha u qorshaysan Guddiga iyo sidii dawladda Sweden ay uga …
Gudoomiyaha iyo xubnaha Guddiga ayaa kulan la qaatay Safiirka dalka Sweden. Read More »
Gudoomiya iyo xubno ka tirsan Guddiga ayaa ansixiyay qorshaha Guddiga(TPEC Strategic Plan) .
Gudigga KMG ah ee doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa saaka ansixiyay qorshihii uu ku shaqayn lahaa Guddigu (TPEC Strategic Plan) iyo tubtii doorashada Dowladaha hoose ee Puntland. Doorashadaas oo ah qof iyo cod ayaa Guddigu qorsheeyay in lagu qabto muddo labo sano gudahood ah.Qorshahaas ayaa lagu faah faahiyay road mapka iyo strategic planka Guddigu diyaariyay kaasoo …
Gudoomiya iyo xubno ka tirsan Guddiga ayaa ansixiyay qorshaha Guddiga(TPEC Strategic Plan) . Read More »
Copyright © 2022 Gulled Salah | Powered by Shaac Company